Isamsung yazisa i-Galaxy Tab ye-S5e, ithebhulethi ebhetyebhetye kakhulu kunye nenhle kwimakethi ye-Android | Iindaba zeGajethi
Isamsung yazisa i-Galaxy Tab ye-S5e, ithebhulethi ecekeceke kwaye intle kwintengiso ye-Android
UIgnacio Sala | | amacwecwe
Imakethi yethebhulethi ye-Android inyiniwe kwimveliso eveliswa yinkampani yaseKorea kwintengiso, kuba abanye abavelisi abanikeli ngeemodeli kunye nezo zinikezelayo, banezibonelelo ezifanelekileyo Ukunciphisa umda ekusebenziseni esinokukunika ukujonga amaphepha ewebhu, ukufunda iposi nokunye okuncinci.
Ukuba sifuna ukusebenzisa umxholo wemultimedia kunye nokudlala omnye umdlalo onamandla, Inketho ekuphela kwayo esemgangathweni kwintengiso inikezelwa yiSamsung. Isamsung isandula ukwazisa ithebhulethi entsha, iGlass Tab S5e, ithebhulethi eyilelwe ukubonelela ngolona lonwabo lubalaseleyo kunye namava oxhulumaniso. Apha sikubonisa zonke iinkcukacha.
1 Uyilo lweGalaxy Tab S5e
2 Ingqondo eyakhelwe-ngaphakathi kubulela kuBixby
3 Iimpawu zeCinema
4 Ukucaciswa kweGalaxy Tab S5e
5 Ixabiso kunye nokufumaneka kweGalaxy Tab S5e
Uyilo lweGalaxy Tab S5e
IGalaxy Tab entsha ye-S5e ayibonakali kuphela ekusebenzeni kwayo, kodwa ayikulahli uyilo nanini na. I-Tab S5e isinika i Umzimba we-5,5 mm wesinyithi kunye ne-400 gram kuphela yesisindo, eyenza ukuba ibe yenye yezona zinto zixabisekileyo kwaye ziphathekayo kwintengiso. Ukongeza, iyafumaneka ngesilivere, emnyama kunye negolide, ukuze umsebenzisi akwazi ukukhetha imodeli efanelekileyo ngokufanelekileyo ukuthanda kwabo.
Ukuzimela kuhlala kuyeyona nto ibaluleke kakhulu kwithebhulethi, kwaye i-Tab S5e ayisidanisi ngaloo ndlela, njengoko ifikelela Ukuzimela kweeyure eziyi-14,5, enkosi ekusebenzeni kwayo kokubini xa ubrawuza, udlala imidlalo, usebenzisa umxholo ...
Ingqondo eyakhelwe-ngaphakathi kubulela kuBixby
Abancedisi ababonakalayo babe kumakhaya amaninzi enye yosapho. Le thebhulethi intsha ibandakanya iBixby 2.0, umncedisi we-Samsung esinokuthi sinxibelelane nayo kungekuphela ukubuza imibuzo eqhelekileyo malunga nemozulu okanye indlela exakeke ngayo ishedyuli yethu, iba liziko lomsebenzi wokulawula zonke izixhobo ezixhumeneyo.
Enkosi kuBixby, sinokwenza imisebenzi kunye, njenge vula umabonwakude kwaye izibane zicime amandla abo kwaye batshintshe umbala oshushu. Kodwa ukufumana okuninzi kuyo, kuxhomekeke ekusebenziseni esifuna ukukwenza, enkosi kwikhibhodi yayo (ethengiswa ngokuzimeleyo) singayiguqula i-Tab S5e ibe ngumbulelo wekhompyuter kwi-Samsung DeX.
Isamsung iDeX liqonga leselula / ledesktop elibekwa sithi nguSamsung, lisinika amathuba uninzi lwethu ebeluphupha ngalo ngaphambili kwaye kananjalo Ikwafumaneka kwiitheminali eziphezulu zenkampani ezinje ngeGPS S9 kunye neGalaxy Note 9.
Ukuba enye yezinto esiza kuzinika ithebhulethi kukusebenzisa ividiyo ekusasazeni, okanye ikhutshelwe ngqo kwisixhobo, enkosi Umboniso omkhulu we-AMOLED, siya kuba nakho ukuyenza ngesimbo. Isikrini sisinika ifayile ye Umyinge we-16: 10 kunye no-10,5 intshi ngezakhelo ezincitshisiweyo ezisinika imvakalelo yokuntywilisela esingayi kuyifumana kwamanye amacwecwe kwintengiso.
Ukuba asinayo nayiphi na inkonzo yevidiyo yokuhambisa, xa sithenga i-Tab S5e, siya kuba nakho Yonwabela iNkulumbuso yeYouTube simahla kunye neenyanga ezi-4, umculo omkhulu kunye nevidiyo yokusasaza inkonzo.
Isandi yenye yecandelo elibalulekileyo ekufuneka silithathele ingqalelo xa uthenga isixhobo solu hlobo kwaye i-Galaxy Tab ye-S5e ayisileli malunga noku. Le modeli isinika umgangatho ophakamileyo wesandi enkosi Izithethi ezi-4 ezinetekhnoloji ye-stereo ejikelezayo ngokuzenzekelayo Banikezela ngeaudiyo enamandla ehambelana nendlela oyiphetheyo ithebhulethi.
Ukongeza, iyasinika ukudityaniswa kwetekhnoloji yeDolby Atmos kunye nesandi sokutyikitywa kweAKG esinika isandi esingqonge i-3D. Ukonwabela umgangatho wesandi onikezelwa yiTab S5e, iSamsung isinika umrhumo wasimahla wokubhaliselwa kwiSpotify kangangeenyanga ezi-3, inyuselo elongezwa kuleyo ibonelelwa yiYouTube ngeqonga layo lokusasaza ividiyo
Ukucaciswa kweGalaxy Tab S5e
I-Samsung Galaxy Tab S5e
Isikrini 10.5 ”WQXGA Super AMOLED esivumela ukuba sivelise ividiyo ye-UHD 4K kwii-60 fps.
Inkqubo Iprosesa ye-Octa-core 64-bit (2 × 2.0 GHz kunye ne-6 × 1.7 GHz)
Imemori kunye nokugcinwa 4GB + 64GB okanye 6GB + 128GB - microSD ukuya ku-512GB
evakalayo Izithethi ezi-4 ze-AKG ezinetekhnoloji yeDolby Atmos
Igumbi eliphambili Isisombululo se-13 mpx esinokurekhoda ngaso iividiyo kwi-UHD 4K (3840 × 2160) @ 30fps
Cámara trasera Isisombululo se-8 mpx
Izixhobo I-Accelerometer-Isivamvo seFingerprint -IGyroscope-Isenzi seGeomagnetic - Isenzi seHolo- Isivamvo sokukhanya seRGB
Conectividad I-Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4G + 5GHz - VHT80 MU-MIMO - iWi-Fi ngqo- iBluetooth v5.0
Ubukhulu 245.0 x 160.0 x 5.5mm
U bunzima I-400 gram
Ibhetri I-7.040 mAh ngenkxaso ekhawulezileyo yokuhlawula
Inkqubo yokusebenza Ipie ye-Android 9.0
Izixhobo Isimbozo sencwadi yebhodi yezitshixo-Isiseko sokutshaja iPOGO-ikhava elula
Ixabiso kunye nokufumaneka kweGalaxy Tab S5e
Entsha I-Samsung Galaxy Tab S5e iya kufika kwintengiso ngo-Epreli, kodwa okwangoku, amaxabiso emodeli esisiseko ene-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina ayabhengezwa. Nje ukuba babhengezwe siza kukwazisa kwangoko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » amacwecwe » Isamsung yazisa i-Galaxy Tab ye-S5e, ithebhulethi ecekeceke kwaye intle kwintengiso ye-Android
I-Logitech K600, sihlalutya eyona bhodi yezitshixo ilungileyo ye-Smart TV
Kufuneka wenze ntoni ukuba mobile yam ibiwe